QM oo baareysa markab Turkish ah oo lagu arkay xeeb ay maamusho Al-Shabaab - Caasimada Online
Home Warar QM oo baareysa markab Turkish ah oo lagu arkay xeeb ay maamusho...
QM oo baareysa markab Turkish ah oo lagu arkay xeeb ay maamusho Al-Shabaab
Istanbul (Caasimada Online) – Guddiga khubarada QM ee qaabilsan Soomaaliya, kuwaas oo kormeera hubka sharci-darrada ah ee lasoo geliyo dalka, ayaa sheegay inay baarayaan markab Turkish ah oo lagu arkay xeebta aag ay maamusho Al-Shabaab, bishii August 2021, sida uu qoray Wargeyska Nordic Monitor oo helay caddeymo muujinaya arrintan.
Markabka oo ay leedahay islamarkaana maamushoa shirkadda Mavi Deniz Taşımacılığı ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ee fadhigeedu yahay Istanbul, ayaa muddo 24 saac ah ku sugnaa meel kaliya 1000-meter ama hal km u jirta xeebta aag maamusho Al-Shabaab, sida laga ogaaday qalabka ku xiran markabka ee sheega halka uu ku sugan yahay ee loo yaqaan (AIS)
“Aagaas ma ahan meel ay maamulaan ciidamada amniga Soomaaliya, waana meel ay Al-Shabaab maamusho, waxaa loo yaqaan Cali Gaudud, oo u dhow Cadale,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay baarayaasha QM.
Sida muuqata, shakiga ayaa ka dhashay sababta markab uu muddo 24 saac ah ugu sugnaa aag ay maamusho Al-Shabaab, waxaana ka dhashay tuhun ah in laga yaabo inuu hub u geeyey kooxda.
Milkiilayaasha markabka ayaa sheegay inay weerar kula kulmeen xeebaha Soomaaliay 13-kii August 2021, islamarkaana lagu soo rogay qorayga sabanka ama RPG iyo rasaas yaryar, sida laga soo xigtay kabtanka markabka.
Ayada oo ay u muuqato inaanay ka dhaadhicin sheekadaas, ayaa baarayaasha QM waxay warqad rasmi ah u direen shirkadda Turkish-ka ee leh markabka, ayaga ka dalbaday caddeymo ku saabsan sababta markabka ugu xirtay biyo aad ugu dhow meel ay maamusho Al-Shabaab iyo xog dheeri ah oo ku saabsan weerarka ay sheegeen in lagu qaaday.
Shirkadda ayaan kasoo jawaabin su’aalihii baarayaasha QM, waxaana warbixinta loo gudbiyey Golaha Ammaanka QM, 6-dii October 2021.
Dowladda Turkiga ayaan weli ka hadlin dhacdadan.
Baaritaanka QM ayaa muujinaya in markabka uu ka tegay Fethiye oo ka tirsan gobolka ku yaalla Koonfurta Turkey ee Antalya, islamarkaana ku nagaaday xeebta aaggan ay maamusho Al-Shabaab 12-kii illaa 13-kii August.
Sida ku cad xogta diiwaan-ka, markabka ayaa waxaa leh qoyska ninka ganacsade Turkish ah oo lagu magacaabo Erdal Tümsek.
Shirkadda markabka leh ayaa bishii Febraayo 2019 codsatay in laga badbaadiyo inay musalafto, taasi oo ay maxkamad ogolaatay. Inkasta oo dhowr mar loo dheereeyey badbaadadaas, haddana ugu dambeyn shirkadda ayaa musalaftay 15-kii September 2021, sida ku cad go’aan kasoo baxay maxkamad ganacsi oo ku taalla Istanbul.
Tani waxa uu macnaheedu yahay in xilligii markabka uu ku xiranayey halka shakiga uu ka dhashay, ay shirkadda leh wajaheysay culeys dhaqaale.
Arrinta kale ee shakiga weyn dhalisay ayaa ah in markabka ay horey u laheyd hay’ad Turkish oo lagu magacaabo IHH, oo hadda kahor lala xiriiriyey ururuka Al-Qacida, taasi oo iska iibisay 2018.
Waxaa sidoo kale marar badan soo baxay caddeymo muujinaya in IHH ay taageero siisay kooxaha Daacish iyo Al-Qacida ee Iraq iyo Syria.
Bishii Janaayo 2014, dacwad-oogaha Turkey ayaa dacwaddii ugu horeysay ka xareeyey hay’adda IHH kadib markii baaritaan ay sameeyeen booliska lagu ogaaday inay hub u dusisay jihaadiyiin Al-Qacida ah oo ku sugan Syria.